अक्षरहरू, अक्षरहरू, अक्षरहरू ... तिनीहरूका लेखकहरू ठूला शहरहरूमा र साना शहरहरू, अध्ययन, काम, वा पहिले नै सेवानिवृत्त भएका छन्। तर ती सबै महिलाहरू महिला हुन् जुन प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छन्: "कसरी मानिस राख्नुहुन्छ?" म उनीहरूको अनुभव र मेरो साथीहरूको अनुभवबाट सुरू गर्न प्रयास गर्नेछु, जसको लागि एकपटक कसरी प्रश्न राख्ने मानिस मानिसको रूपमा पीडा र तीव्र। म मेरो साथीहरूसँग लामो कुराकानीको सम्झना सम्झन्छु - र कसरी मानिसलाई राख्नको तिनीहरूको विचार। अक्षरहरूको लेखकहरूलाई न्याय दिनुहोस् कि मेरो जवाफले मद्दत गरेको वा तिनीहरूलाई सहयोग गर्दैन।
त्यसैले, सुरू गरौं।
विवाहित मानिस कसरी राख्नुहुन्छ?
सबै भन्दा सजिलो प्रश्न सजिलो जवाफ हो! एक विवाहित पुरुष प्रश्नहरु र उदाहरणहरू जस्तै कहिल्यै नबिर्सनु पर्दछ: "जब तपाईले आफ्नी श्रीमतीलाई बिहे गर्नुहुन्छ?" र "छनौट गर्नुहोस् वा पत्नी वा म!" (निश्चित गर्नुहोस् कि उसले तपाईलाई रोज्ने छैन)। अर्को शब्दमा, तपाईले पनि उनीहरूलाई संकेत नगर्नुको बारेमा रजिस्ट्री कार्यालयको रूपमा यस्ता राज्य संस्थाहरूको अस्तित्वको बारेमा के थाहा छ। वैसे, मलाई आशा छ कि तपाईं यति धेरै सुन्दर नहीं सोचने को लागी कि तपाईं केवल आफ्नो विवाह संग आफ्नो विवाहित प्रेमी को साझा गर्छन।
कसरी मायालु मानिस राख्न को लागी?
"हामी एकजना मानिसलाई माया गर्छौं, कमै हामीले उहाँलाई आफ्नो प्रेमको शक्ति देखाउनुपर्छ।" तपाईं यस उत्तर बाट सन्तुष्ट हुनुहुनेछ - कुन बाल्जैकले तपाईंको शताब्दीको सातातिर सोधिने प्रश्न गर्नुभयो?
के यो बच्चालाई सम्भव राख्न सम्भव छ?
कति मानिस हो पति? हो, धेरै। धेरै दशक पहिले, देशको आबादीले दुई मापदण्डको कारण बढ्यो: विवाहित जोडीहरूको इच्छा आफ्नो जीवित ठाउँ बढाउन, र विवाहित महिलाहरु को इच्छा आफु आफैले पतिलाई राख्न को लागी। के मानिस एक प्रेमी हो जब एक बच्चा बच्चा सम्भव छ? यदि त्यो नि: शुल्क छ भने, बच्चा सम्भव छैन कि तपाईबाट अलग रहनु हो (खासगरी यदि तपाईं आफ्नो रखरखावको लागि धेरै पैसा माग्न शुरु गर्नुहुन्न र विवाहको बारेमा कुरा गर्नुहुने छैन) - तर उहाँले तपाईंलाई विवाह गर्न बाध्य गर्नुहुन्न। यदि त्यो विवाहित छ भने, उहाँले तपाईंको बच्चाको परिवारलाई त्याग्नुहुन्न। तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कि सबै पुरुषहरू आफ्ना छोराछोरीहरूको अधिक रमाइलो छन् जुन वैवाहिक विवाहमा जन्मिएका थिए।
यदि तिनीहरूसँग आफ्नो बच्चाहरु संग कुनै छोराछोरी छैन भने, तपाईसँग एक बलियो ट्रम्प कार्ड छ। प्रदान गरिएको छ कि पत्नीले आफ्नो आस्तीनमा अझ लुकाउन नदिई: उदाहरणका लागि, तिनको बुबाले आफ्नो दासलाई आफ्नो कार्यालयमा लिनुभयो, वा तिनलाई आफ्नो व्यवसाय खोल्न ठूलो रकम तिर्नुभयो।
के यो व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्न सम्भव छ?
यदि तपाईंले पत्ता लगाउन सफल भएमा एक व्यक्ति केहि अरूद्वारा राख्न सकिन्छ - तुरुन्तै डिभाइजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लागु हुन्छ। त्यस पछि - कम से कम आफ्नो कम्प्याटियटहरूमा गोप्य खोल्नुहोस्।
कसरी यौन सम्बन्ध पछि एक पुरुष राख्ने?
अजीब प्रश्न। र किन सेक्स पछि राख्नु पर्छ? के तपाईंले बिस्तारै गरम लोहे संग जलाइदिनुभयो? वा तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईं मालकिनको रूपमा यति विनाशकारी हुनुहुन्छ?
राम्रो सेक्सको लागि, एक पुरुष सधै फर्किनेछ - यदि यो महिलाको साथ मात्र एक विवादको लागि बिस्तरमा गएर (र यो मामला हो), र यदि उनले सबै महिलाहरूलाई विवाह गर्नु अघि पुरुषसँग सम्पर्क राख्ने गर्दथे, पहिलो प्राचीन कामदारको सिंडिकेटमा।
कसरी मानिस यौन सम्बन्ध राख्ने?
उहाँसँग सेक्स गरिरहनु हुन्छ - कसरी र?
धनी मानिस कसरी राख्नुहुन्छ?
हामी तपाईंको प्रश्न को सार को सतह ले आओस्। वास्तवमा, तपाईं सोध्न चाहानुहुन्छ कि कसरी एक धनी मानिस कसरी राख्न, तर यो कसरी सकेसम्म तपाईंसम्म खर्च गर्न सक्नु हुन्छ?
धनी मानिसले प्रारम्भिक बुझ्छिन् कि औसत महिला उनको मा आकर्षित हुन्छ, आफैलाई होइन, तर उसको वालेटको सामग्री। यसैले, सजिलै र बिना हेरचाह गर्नु, त्यो त्यो केटी वा महिलामा आफैं गर्दैनन् भनेर खर्च गरिनेछ। तथापि, तपाईले यस्तो प्रश्न सोध्नु भएको तथ्यको आधारमा, तपाईंको मामलामा स्थिति पर्याप्त छैन। त्यसकारण, केवल अवसर प्रयोग गर्नुहोस्, जबसम्म यो तपाईंसँग यो खर्च गर्न चाहानुहुन्छ - उचित खर्चमा यी खर्चहरू निर्देशित गर्न। एक महंगा महान् रेस्टुरेन्टमा डिनरले तपाईंलाई बिल तिर्न मद्दत गर्दैन, तर दस वर्षमा सुनको लिरा कम से कम छ महिनामा तिर्नेछ।
जवान मानिस कसरी राख्नुहुन्छ?
त्यो मेरो साथी, दुई वयस्क छोराहरु को आमाले मलाई गत वर्षको छुट्टै घर फर्कने पछि मलाई भन्नुभयो: "हाम्रो आमा र छोरो हाम्रो होटलमा रह्यो, र मैले हरेक दिन उनको प्रशंसा गरे। केटा धेरै हेरचाह गर्दै थिए, एक लाच जस्तै आफ्नो आमा वरिपरि पहेंलो। एकपटक, पूल नजिकैको, हामी अर्को सिउचमा थिए। उनी होटलमा डराउँथे - उनले उसलाई पठाउनुभयो कोठाबाट क्रीम, वा पत्रिका, जुन उनले बिर्सिएको थियो। म यसलाई खडा गर्न सकिन र उसलाई यसो भनें: "तपाईसँग कस्तो असल छोरा हो, तपाईले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ?" उनले मलाई फर्के र शान्त जवाफ दिए: "म उसलाई बढी तिर्नेछ - यो पनि हेरचाह गर्नेछ।" म भाषणमा थिएँ, र उनले मलाई शान्त रूपमा मेरो बाट फर्काइदिए। "
र यहाँ मेरो साथीले मलाई एक महिलाको बारेमा बताउनुभएको छ, जुन धेरै वर्ष उनको ग्राहक हो: "तिनी कहिल्यै विवाहित भएनन् र कहिलेकाहीं काम गरेनन्। सबै वर्ष उहाँसँग एक मात्र प्रेमी छ, विवाहित, जो उनको भन्दा 15 बर्ष भन्दा कम छ। के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि उनले मात्र तयार पार्छ, तर यसको अंडरवियर पनि मेटाउँछ? तर सबै भन्दा रोचक छ कि तपाईंले तिनलाई देख्नुहुनेछ: त्यो शायद कुर्सीमा फिट हुन सक्दछ ... "।
त्यहाँ पुरुषहरू छन् जसले महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् जुन तिनीहरू भन्दा धेरै पुरानो हुन्छन्। असीमित रूपमा, यस्तो जोडीहरू सबैभन्दा शक्तिशाली प्रेम संघहरू हुन्। यसैले, यदि तपाईंको मित्र उनी मध्ये एक हो, तपाई चिन्ता गर्नुपर्दैन। अन्यथा, त्यहाँ माथि सेटअप गर्ने पहिलो विकल्पमा अवस्थित छ भने, यदि तपाई नैतिक रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भने।
कसरी वयस्क मान्छे राख्न को लागी?
एक प्रश्नले मलाई दुःखलाग्दो बनायो। यो दु: खी छ किनभने मैले केटीलाई सोधेँ जसले उनलाई सोधे। र किनकी, मेरो उत्तर पढ्न पछि, यो केटीले उनलाई तुरुन्तै अर्थ दिदैन, तर केवल कष्टप्रद मलाई एक मूर्ख बोलाउछ जुन केहि कुरा बुझ्दैन। यो मानिन्छ कि हामी उमेरको भिन्नताबारे कुरा गर्दैछौं, जुन 5-10 वर्ष भन्दा बढी छ। पुरुषहरु जो केटीहरु संग संपर्क मा आउछन् जो राम्रो तरिकाले आफ्नो छोरीहरु (र कहिलेकाहीँ दाजुभाइहरु) हुन सक्छ यो - होशियार वा बेहोशपूर्वक - एकमात्र उद्देश्य संग: युवा शरीर संग आफ्नो शरीर को ऊर्जा को लागि। यस अवस्थामा, एक नियमको रूपमा, तिनीहरू एक तर धेरै जवान मालकिनहरू छैनन्। यस्ता पुरुषहरूलाई इमान्दार बनाउनको लागी, किनकि तिनीहरू सबैलाई छोड्न जाने छैनन् - जबसम्म उनीहरूलाई उनीहरूको साझेदार एक सानो सानोमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन।
यो मानिससँग रहनुहोस्, यदि तपाई हालै तपाईको जीवन बिना सोच्न चाहानुहुन्छ, तर आशा गर्नुहुन्न कि उहाँले तपाईंलाई विवाहित गर्नुहुनेछ। तपाईंको परिवार र तपाईंका छोराछोरीहरू को लागी अझ राम्रो छ के बारे सोच्नुहोस्, र आफैले आफ्नो उमेरको मानिसलाई पढ्न। यो सम्भव छैन कि तपाईं आफ्नो चालू प्रेमीमा रुचाउनुहुने छ जब तपाइँ 30 मा जानु हुन्छ।
मानिसहरू किन सुन्दर स्त्रीहरू डरन्छन्?
तिमीलाई कसरी विवाहित मानिस मन पर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ?
केटा र केटी बीच मित्रता
पुरुषहरूको आँखाको आदर्श मालकिन
मानिस कसरी मिस गर्न सकिन्छ?
कसरी मानिसलाई उहाँको प्रेम साबित गर्ने?
प्याज पछि रोप्न सकिन्छ?
महिला वसन्त जूता - स्प्रिंगको लागि फैशनेबल र स्टाइलिश जोडे
कुत्तहरुको लागि रूले
भरिएको जुचिन, ओवनमा पकाइएको
छोराछोरीको लागि नाकमा भिसाडिलिङ ड्रपहरू
Zac Efron र उनको प्रेमिका - 2016 को समाचार
समुद्री काल - उपयोगी गुणहरू
कुन रंगमा मैले भान्सा पेंट गर्नुपर्छ?
भित्ता घुँडा घुमाईयो
गलियारे र हलवे को लागि वालपेपर - सजावट को पर्खालहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो विचार र विकल्प
बच्चाहरूको क्रिसमस रेखाचित्र
कसरी चर्कोबाट कम्पन ब्रेक गर्नुहुन्छ?
टन्सिलाइटिसमा गला गुमाउनु भन्दा?
जम्पिंग रस्सी के गरौं?
कसरी प्रति महिना5किलोग्राम गुमाउनु पर्छ?
फैशनेबल महिलाको जाडो जैकेट